किन चलेनन् सलमानका यी फिल्म ? - Internet Khabar
February 25, 2018 Internet Khabar Desk
सलमान खान अभिनीत पछिल्लो फिल्म टाइगर जिन्दा है ले उत्कृस्ट व्यापार गरेको छ ।
सलमान अभिनीत यसअघिको फिल्म ट्युबलाइट असफल भएको थियो । पछिल्लो दशकमा सलमान अभिनीत लगभग सबै फिल्म सुपरहिट भएका छन् । तर, उनले केही सुपरफ्लप फिल्म पनि दिएका छन् । मैने प्यार किया, साजन, करण अर्जुन, जुडवा, प्यार किया तो डरना क्या, हम दिल दे चुके सनम, नो इन्ट्री, वान्टेड, दबंग, दबंग २, एक था टाइगर, किक, रेडी, सुल्तान सलमानका ब्लकबस्टर फिल्म हुन् ।
सलमान खान अभिनीत फ्लप फिल्म हो, निश्चय । सन् १९९२ मा रिलिज भएको सो फिल्मको इमाइल श्राफले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा सलमानका साथमा विनोद खन्ना र करिश्मा कपुर मुख्य भूमिकामा थिए । फिल्मले जम्मा ९५ लाख भारु व्यापार गरेको बताइन्छ । जबकि, फिल्मको बजेट साढे तीन करोड भारु बताइन्छ ।
सलमान अभिनीत अर्काे फ्लप फिल्म हो, मझधार । २९ मार्च १९९६ मा रिलिज भएको यो फिल्मको पनि इमाइल श्राफले निर्देशन गरेका हुन् । सलमानका बाबु सलिम खानले लेखेको फिल्ममा सलमानका साथमा मनीषा कोइराला, राहुल रोयलगायतले अभिनय गरेका छन् । तीन करोडमा बनेको फिल्मले झन्डै एक करोड मात्रै व्यापार गरेको बताइन्छ ।
राकेश कुमारको निर्देशनमा बनेको सूर्यवंशी १४ फेब्रुअरी १९९२ मा रिलिज भएको थियो । फिल्ममा सलमानका साथमा अमृता सिंह मुख्य भूमिकामा थिइन् । फिल्मले जम्मा एक करोड पाँच लाख भारु व्यापार गरेको बताइन्छ ।
सलमानको अर्काे फ्लप फिल्म हो, कुर्वान । ३१ मार्च १९९१ मा रिलिज भएको यो फिल्मले निर्मातालाई चुर्लुम्मै डुबाएको थियो । साढे तीन करोड भारु लागेको फिल्मले एक करोड आठ लाख भारुको मात्र व्यापार गरेको थियो । दीपक बाहरे निर्देशित फिल्ममा सलमानका साथमा आयशा जुल्का, सुनील दत्त, कबिर बेदी, गुल्सन ग्रोभरलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
एक लड्का एक लड्की
विजय सदानाको निर्देशनमा बनेको एक लड्का एक लड्की पनि सलमानको फ्लप फिल्म हो । १८ जुन १९९२ मा रिलिज भएको फिल्ममा सलमानका साथमा नीलम, अनुपम खेरलगायतका कलाकार मुख्य भूमिकामा थिए । दुई करोड भारु लगानी लागेको फिल्मले मुस्किलले एक करोड कमाएको थियो ।
दिल तेरा आसिक
लरेन्स डिसुजाले निर्देशन गरेको दिल तेरा आसिक पनि फ्लप भएको थियो । २२ अक्टुवर १९९३ मा रिलिज भएको फिल्ममा सलमानका साथमा माधुरी दीक्षित र अनुपम खेर मुख्य भूमिकामा थिए । चार करोड लगानी लागेको फिल्मले दुई करोड मात्र कमाएको थियो ।
सावनकुमार टाकले निर्देशन गरेको चाँदका टुकडा पनि दर्शकले मन पराएनन् । १९ अगस्ट १९९४ मा रिलिज भएको फिल्ममा सलमान र श्रीदेवी मुख्य भूमिकामा थिए । प्रेमकथानक फिल्ममा सलमानभन्दा श्रीदेवीलाई हाइलाइट गरिएको थियो । फिल्मले जम्मा दुई करोड भारु व्यापार गरेको थियो ।
सलमानको अर्काे सुपर फ्लप फिल्म हो जागृति । ३ जुलाई १९९२ मा रिलिज भएको फिल्मले जम्मा दुई करोड भारुको व्यापार गरेको थियो । जबकि, फिल्मको लगानी सात करोड भारु बताइन्छ । फिल्ममा सलमानका साथमा करिश्मा कपुर मुख्य भूमिकामा थिइन् । सुरेश कृष्णले निर्देशन गरेको फिल्मको निर्माता एसआर सेट्ठी हुन् ।
२२ अक्टुबर १९९३ मा रिलिज भएको चन्द्रमुखी पनि सलमानको फ्लप फिल्म हो । देवालय डेको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा सलमानका साथमा श्रीदेवी र मनीष बहल मुख्य भूमिकामा छन् । आठ करोड भारुमा बनेको फिल्मले जम्मा सवा दुई करोड व्यापार गरेको थियो ।
सलमानको संगदिल सनम पनि फ्लप फिल्म हो । २ फेब्रुअरी १९९४ मा रिलिज भएको फिल्ममा मनीषा कोइराला हिरोइन छिन् । झन्डै १० करोड भारुमा बनेको फिल्मले साढे तीन करोड मात्र कमाएको थियो । सोमु मुखर्जीले निर्देशन गरेको फिल्मका गीत भने चर्चित थिए ।
हेयर स्ट्रेट गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस
कोमल वली एमालेकी राष्ट्रियसभा उम्मेदवार
बडा दसैँको शुभ साइतमा छोरा अनमोल केसीलाई टिका लगाएर आर्शिवाद दिदैँ अभिनेता भुवन केसी
May 30, 2016 December 6, 2016
बाजिराव मस्तानी’ र ‘बजरंगी भाइजान’ सर्बाधिक बिधामा मनोनयन
अक्षय कुमारको शोमा यसकारण गएनन् कपिल शर्मा
June 12, 2018	 0	भक्तपुरमा प्रदेश राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन
राष्ट्रपति भवन पछाडी फलामको खोरमा थुनिएका यी बालक (भिडियो हेर्नुहोस्)
काँग्रेसमा मन्त्रीको भागवण्डा अझै मिलेन, अब अर्जुननरसिंह केसी पनि मन्त्री बन्न तयार
प्रधानमन्त्रीलाई साउदीबाट नेपालीहरुको सात बुँदे माग, नयाँ कामदार नपठाउन आग्रह
४० जना नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बाराणसीमा दुर्घटना
तपाई हिड्दा हिड्दै चिप्लनुभयो भने उठ्न सक्नुहुन्छ
ओलीको देश बनाउने बोलीमा कत्तिको दम छ??
डोलेश्वर महादेवमा महाशिवरात्रिको तयारी पूरा